SMPTE® UK အပိုင်းသည် Real-Time မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို SDI မှ IP သို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SDI မှစ. IP ကိုမှရီးရဲလ်အချိန်မီဒီယာပို့ဆောင်ရေးရွှေ့ပြောင်းအပေါ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုင်ထားမှSMPTE®ဗြိတိန်ပုဒ်မ
လန်ဒန်, ဗြိတိန် (PRWEB) ဇန်နဝါရီလ 20, 2016
Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားEngineers®၏အသငျး (များ၏ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (UK) ပုဒ်မSMPTEယနေ့ပြုလုပ် "- SDI မှစ. Hybrid ကိုမှအပြည့်အဝ IP ကိုမှရီးရဲလ်အချိန်မီဒီယာပို့ဆောင်ရေး" အမည်ရတစ်ရက်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးပွဲအားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေးအတွက်®), ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, လန်ဒန်မြို့ရှိ 11 ဖေဖော်ဝါရီလပေါ်မှာ။ နည်းပညာများ Real-time မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျောထောက်နောက်ခံနှင့်ပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများသုံးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် format နဲ့-Agnostic စက်ရုံမှလမ်းကြောင်းများရှာဖွေစူးစမ်းဆန်းစစ်ဖို့ထို့အပြင်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုဗြိတိန်မီဒီယာများစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နိုင်ငံတကာဧည့်သည်စပီကာသောမတ်စ် Edwards က, FOX မှာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများကတင်ဆက်မည်ဖြစ်သည် networks အင်ဂျင်နီယာနှင့်စစ်ဆင်ရေးအင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) မှအကူးအပြောင်းနှင့်အတူဆက်စပ်ကိစ္စများ, စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဗိသုကာပေါ်မှာ။
အဆိုပါနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို real-time အိုင်ပီ-based မီဒီယာပေးပို့များအတွက်လက်ရှိနှင့်ထွန်းသစ်စနည်းစနစ်များနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများရှာဖွေစူးစမ်းတင်ပြချက်များ feature ပါလိမ့်မယ်။ စပီကာဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများဖိုရမ် (VSF) နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ၏အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမည်; အပြည့်အဝ IP ကိုအဆောက်အဦများအတွက်ကွန်ယက်ကိုလိုအပ်ချက်များကို; မြင့်မားတဲ့ dynamic range ကို (HDR) နဲ့ Ultra-high-definition (UHD) content များအတွက်ထောက်ခံမှု, ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံးအကုန် (WCG), နှင့်မြင့်မားသည် frame နှုန်း (HFR) နဲ့အိုင်ပီ-based စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အနာဂတ်ဗိသုကာ; အဖြစ်စွဲငြိဖွယ်ရာ (အရာဝတ္ထု-based) အသံဖိုင်။ နေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးလုံလောက်သောစေားနှင့်အတူလပ်ချိန်တက်ရောက်အလွတ်သဘောဆွေးနွေးမှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါနေ့ကမီဒီယာကုမ္ပဏီအမှတ်စဉ်ဒစ်ဂျစ်တယ် interface ကို (SDI) မှ IP ကိုမှအောင်မြင်တဲ့အကူးအပြောင်းလုပ်ဖို့ချမှတ်နိုင်သောကွန်ကရစ်ခြေလှမ်းများအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်ကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။
Edwards ကအပြင်, စပီကာ Semtech ၏ Gerard Philips က၏ Nigel ရှေ-Smith ကပါဝငျမညျ Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ (SAM ကို), BT မီဒီယာနှင့်အသံလွှင့်ဂျွန် Ellerton, ၏, Mark Yong အသံအင်ဂျင်နီယာ Society က (AES) နှင့်ဘီဘီစီ၏ပတေရုသ Brightwell အဖြစ် SMPTE ထို့အပြင်က Sky ၏ဗြိတိန်ပုဒ်မသဘာပတိက Chris Johns,, ပေတရု Weitzel, SMPTE အဆိုပါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ဝင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတွင်းရေးမှူး / ဘဏ္ဍာရေးမှူး SMPTE ဗြိတိန်ပုဒ်မ။
အဆိုပါနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ9မှာစတင်ပါလိမ့်မယ်: 30 Broadway မှအိမ်, Tothill လမ်း, Westminster, လန်ဒန်မှာ EEF မှာဖြစ်၏။ အဆိုပါနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများအတွက် VAT အပါအဝင်£ 85 ဖြစ်ပါသည် SMPTE အသင်းဝင်များ; ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက် (ပီပီ), အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗီအဖွဲ့ (DTG), အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်သူများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ (အဖွဲ့ဝင်များအဘို့အ VAT အပါအဝင်£ 165IABM), ဗြိတိန်မျက်နှာပြင်အသင်းနဲ့ AES; Non-အဖွဲ့ဝင်များအတွက် VAT အပါအဝင်နှင့်£ 210 ။ နေ့လည်စာနှင့်စေားထည့်သွင်းထားပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းယခုမှာဖွင့်လှစ် www.smpte.org/uk/2016seminar; အာကာသကန့်သတ်သည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE ဗြိတိန်ပုဒ်မမှာရရှိနိုင် www.smpte.org/uk။ အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE မှာရရှိနိုင် www.smpte.org.
ယင်းအကြောင်း SMPTE®ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (UK) ပုဒ်မ
2012 အတွက် re-ထူထောင်သည် SMPTEယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (UK) ®ပုဒ်မဖန်တီးမှု, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး, အသံလွှင့်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းများတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ထောက်ခံမှုများမြင့်မားဒီဂရီမမြင်စဖူး။ အဆိုပါပုဒ်မလုံလောက်သောစေား, ကွန်ယက်အားအချိန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူခေါင်းစဉ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းများကိုပုံမှန်ဗြိတိန်အနှံ့အစည်းအဝေးတွေနဲ့လန်ဒန်တစ်ဦးချင်းစီလရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပုဒ်မကိုလည်းနှစ်စဉ်တစ်ရက်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ပုဒ်မ၏လူကြိုက်များ၏ဖန်တီးမှုမှဦးဆောင် SMPTE ယင်းအပေါ်တရားဝင်ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အတူပုဒ်မထောက်ပံ့ထားတဲ့ဗြိတိန်ဒေသကြီးယခုနှစ် SMPTE ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ဘုတ်အဖွဲ့။
Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားEngineers® (များ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းSMPTE®)
တစ်ဦးOscar®နှင့်မျိုးစုံEmmy®ဆုပေးပွဲ Motion, ရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားEngineers® (များ၏ Society ရဲ့ဆုရှင်SMPTE®) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနုပညာရဲ့တိုးအတွက်ခေါင်းဆောင်, သိပ္ပံ, နှင့်ပုံရိပ်၏ယာဉ်, အသံ, နှင့် metadata ဂေဟစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုကြောင်းတစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသင်းအဖွဲ့, SMPTE တိုးတက်လာရွေ့လျား-ပုံရိပ်ပညာရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆက်သွယ်ရေးကိုဖြတ်ပြီး, နည်းပညာ, မီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ။ ရာစုနှစ်တစ်ခုအဘို့, SMPTE အဆိုပါထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် SMPTE motion Imaging ကဂျာနယ်နှင့် 800 စံချိန်စံညွှန်းများ, အကြံပြုအလေ့အထများနှင့်အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်ချက်များထက်ပိုမိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, အင်ဂျင်နီယာများ, ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, သုတေသီများ, သိပ္ပံပညာရှင်များ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ - - 6,000 အဖွဲ့ဝင်များကထက် ပို. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကဏ္ဍများအတွက်ဖြည့်ဆည်းသူအများတို့သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းရေရှည်တည်တံ့။ HPA®အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မိတ်ဖက်မှတဆင့်, ဒီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ, ကြော်ငြာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှု, ထောက်ခံမှု, tools များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများပေးသူကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်းကပြည့်စုံနှင့်အခြားနေသည် ပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာအကြောင်းအရာ။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE မှာရရှိနိုင် www.smpte.org/join.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-20
ယခင်: XenData မိတ်ဆက် LTO-7 ကွန်ယက်မော်ကွန်းတိုက် System ကိုပူးတွဲ
နောက်တစ်ခု: ဧဝံဂေလိတရားကိုအသံလွှင့်ကွန်ယက် Myers '' ProTrack နှင့်အတူသို့ပြန်သွားရန်-ရုံးစစ်ဆင်ရေးက Universal ထိန်းချုပ်ရေးရှေ့ဆက်ဘာ